Ogaden News Agency (ONA) – Barakicinta shacabka Gambella oo Mr. O. uu Dacwad ku soo oogay Haya’adda Ingriiska ee DFID
Barakicinta shacabka Gambella oo Mr. O. uu Dacwad ku soo oogay Haya’adda Ingriiska ee DFID
Posted by ONA Admin	/ June 7, 2013
15 saacadood markaad ka socoto Adisababa adigoo sii dhex maraya beeraha qaxwada iyo duur ay dhex joogaan dad lo’lay ah ayaad gaadhi gobbolka Gambela oo ah dhul fidsan oo daaqa ku badan yahay iyo wabiyada.
Deegaanku ma badna oo waa teelteel, dadkuna waa dad dhaadheer oo ka madow kuwa dariska la’eh ee buuralayda dagan. Dadka intooda badan waa qawmiyadaha Nuer iyo Anuak. Nuerka waxay fooda hore ee wajiga ku samaystaan xariijino, waa lo’ley iyo ku beerta galayda dhulkooda oo Ilaahay uu biyo ku manaystay.
Gobolka Gambela oo horey loo iloobay ayaa hadda noqday goob dagaal horumarin, casriyeyn, iyo xuquuqda aadanaha uu ka taagan yahay – waxaa ka mid ah dagaal ka dhex socda Bangiga Aduunka oo u ogolaaday Itobiya sanadkii tagay mashruuc uu ku baxaya $920 Milyan.
Itobiya waxay xooga saartay inay dib u dajin ku samayso tuulooyin iyadoo dhulkii ay lahaayeen dadkaana la siinayo shirkado ajnabi ah iyo maalqabeen Itobiyaa ah (oo Tigree ah), taasaa keentay in loo fiira yeesho gobolka Gmabella oy ka socdaan dib u dajin qasab ah. 45,000 oo qoys ayaa si qasab ah looga qaaday dhulkoodii iyadoo la leeyahay waxaa loo samaynayaa dugsiyo iyo rug caafimaad iyo biya nadiif ah. Waliba qorshaha Itobiya waa inay 42% dhulka Gambella la siiyo shirkado oo laga raro dadkii lahaa. Laba shirkad oo mid tahay Hindi – Karuturi Global Ltd – iyo shirkadda – Saudi Star – oo Milyaardeerka Maxamad Al-Camuudi uu leeyahay.
Arimahaa iyo barikicinta loo gaysanayo shacabka Gambellaha ayaa waxaa soo dhex galay haya’daha u dooda Xuquuqda Aadanaha sida HRW oo la saftay dadka shacabka ah oo qaarkood ay soo galeen xerayaha qaxootiga ee Kenya. Waxayna ku soo oogeen dawladda Itobiya dacwad iyagoo tilmaamaya in barakicintan ay la mid tahay nidaamkii Stalin ee loo yaqaano Isu-gayn (collectivization) dhalisay macaluul, iyo xadgudub badan oo dadkii Chechnya (Shiishaan) iyo Ukraine lagula dhaqmay.
Arimaha barakicinta shacabka Gambellaha waxaa fuliyay Omod Obang Olum oo ahaa M/W gobolka wuxuuna ku doodaa inay ahayd rabitaankooda oo aan qofna la qasbin. Arintaa waxaa beeniyay dadkii laga soo barakiciyay dhulkooda oo hadda qaarkood ay ku jiraan xeryaha qaxootiga oo dacwada ku furay dawladaha deeqda bixiya.
Xadgudubka Itobiya ay ku hayso dadka shacabka ah ayaa dawladaha reer Galbeedka ee deeqda xad dhaafka siiya ku noqday madax xanuun. Lacagaha ay siiyeen Itobiyaa oo gaadhaysa 3Milyaar ($3 Billion) oo doolar oy ugu talagaleen Horumarinta iyo in faqriga lagaga saaro dalkaa ayaa soo xaqiijiyeen hay’adaha iyo saxaafada madaxa banana in loo adeegsaday in lagu dulmo dadka shacabka ah iyo in loo adeegsado hab siyaasadeed oo xisbiga EPRDF/TPLF uu ku kasbado dadweynaha fuqarada ah.
Waxay bilowday hadda shirkad Sharci baadhe ah oo London dagan inay dacwad ku furaan dawladda Ingriiska iyagoo ka wakiil ah nin ay magaciisa iyo sawirkiisaba qariyeen oy ku magacaabeen Mr O. Ninkan oo ah qawmiyadda Anuak oo ku jira qaxootiga Kenya ayaa ka xogwaramay dhibaatada loo gaystay markii laga qaadanayay beertiisa. (Halkan ka Akhri) Wuxuu yidhi ninkaa; “Waxaan daganayn tuulo saaran wabiga oon ku beeran jirnay Gallay, Masago, Liin, Moos. Aad ayaan u faraxsanayn oon u barwaaqaysnayn.”
Wargayska Dailymail oo dacwada Mr. O ka warbixyay ayaa ku tilmaamay inuu ninkaa oo tuuladiisa ku barwaaqaysnaa uu ka soo cararay xaaskiisii iyo eheladiisii suu naftiisa uga badbaadiyo dilka iyo qaraaca naxariis darada ah ee booliska Itobiya wuxuuna hadda ku jiraa xerada ugu weyn qaxootiga caalamka ee Dhadhaab.
Dacwadda uu ninkan u wakiishay shirkada Ingriiska ee sharci baadhida ayuu ku soo oogayaa Idaaradda Horumarinta ee DFID (Department For International Development) isagoo ku dacwoonaya in lacagtii ay bixiyeen lagu dhibaateeyay isaga iyo reerkiisa oo dhulkoodii lagu qaatay. Dawladda Ingriiska ayaa ku andacoota in lacagtan ay bixiyaan lagu horumariyo mashaariic dadka wax loogu qabanayo. Hasa ahaatee dacwadan uu soo oogay Mr. O. ee shirkadda Leigh Day loo wakiishay ayaa muujinaysa in lacagtaa loo adeegsaday in lagu dhibaateeyo dadkaa ugu saboolsanaa caalamka intii wax loogu qaban lahaa sida ay dawladda Ingriiska ku andacoonayso.
Waxaa horey loo soo cadeeyay in mucaawanada ay dawladda Ingriiska bixiso ay dawladda Itobiya ku bixiso mushaharka iyo qalabka la siiyo ciidanka Liyu Booliska loo yaqaano oo dhibaatooyin aan la soo koobi karin u gaystay shacabka S.Ogadenya iyo qawmiyadaha kale ee ciidankaasi ay ka hawlgalaan.
Waxaa dhici doonta in dadka laga soo barakiciyay Ogadenya oo jidhdil badan loo gaystay oo ka muuqda korkooda ay dacwada ku soo oogaan dadkii dhibaatadaa u gaystay oo la yaqaano iyo dawladaha lacagta bixiya lagu maalgaliyo Hawaarinta.
shucuubta itoobiya oodhanbaa dulman gaar ahaan shacabka ogaadeeniya iyo oromo haba udaraadaan